MAXKAMADAHA: HALYEY TAARIIKH KA TEGEY
Waxaa qoray Xasan Mire Maxamed
Anigoon taariikhda Midowga Maxkamaha Islaamka (MMI) wax sidaa ah dib ugu noqon, waxaa hal-mar ay u soo shaac bexeen dagaalkii iyaka iyo qab-qablayaashii dagaalka ku dhexmaray magaalda Muqdishu dhamaadkii Feebaraayo sanadka 2006. Wixii ilaa iyo waqtigaa ka danbeeyey, waxay ahaayeen urur miisaan culus ku leh siyaasadda Soomaaliya ilaa laga soo gaaro 27-12-2006.
Ula jeedadii loo aasaasay MMI, qofba si ayuu u fasirtaa. Hase ahaatee, markii fasiraadaha dhamaantood la isku soo wada duubo waxaa la dhihi karaa, MMI waxay u aasaasmeen soo celinta sharciga iyo kala danbeynta iyo weliba xaqsoorkii lumay wixii ka danbeeyey markii dowladdii milaterigu dhacday.
Qaraalkani waa faalo kooban oo lagu qaadaadhigi doono marxaladihii ugu danbeeyey ee wadanku soo maray guud ahaan, gaar ahaana aan ku taaban doono guulihii taariikhiga ahaa ee MMI gaareen, fashilkii MMI ku dhacay iyo dareenkeyga ku aadan Dowlada Federaalka Ku Meel Gaarka (DFKMG).
Guulihii taariikhiga ahaa ee Maxkamaduhu gaareen
Guulaha MMI gaareen wey badnaayeen waxaase kuwooda ugu waaweeyn kamid ah:
Waxay ka adkaadeen qabqablayaashii dagaalka Xamar heystay;
Soo celintii sharcigii iyo kala danbeyntii meelihii ay heysteen;
Furiddii geggida dayuuraha iyo dekedda Muqdisho;
Nadiifintii qashinkii buuraha ahaa ee Xamar;
Wax-qabadkii samafalka ee MMI:
Gurmadkii gargaar ee abaaraha saameeyey koonfurta wadanka;
Abaabulkii weynaa ee wax uga qabteen daadadkii wadanka ku dhuftay;
Ka hadlida quursiga aan qiilka laheyn;
Markaad u kuurgasho taageerada weyn ee MMI ka heleen Soomaalida iyo dhamaan muslimiinta caalamka dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaa saldhig u ah inay awood u yeesheen soo celinta sansaan dowladnimo iyo jewi degganaansho geyi aan la islaheyn waaka suurta gal quusna laga taagnaa. MMI waxaay ummadda u muujiyeen akhlaaq maamul oon is-qab-qabsi laheyn waxaana ka muuqday oo ilaa iyo hadda ku sifeysan yihiin madax heybad hogaamin leh markeey hadlaana taabta dareenka dadka kana tarjumayey rabitaankooda. Waa midaa ta dhaxalsiisay inay hantaan taageerada muwaadiniinta Soomaaliyeed intooda badan.
Fashilkii MMI Ku Dhacay
Sida ay aniga ila tahay, guuldaridii MMI ku dhacday waxaa loo kala qaybin karaa labadan arrimood:
Maqnaanshaha ruug caddaa siyaasiyiin Soomaali ah oo fahansan siyaasadda cusub ee dunida maanta;
La�aanta khuburo milateri oo MMI kala taliya cawaaqibka ka dhalankara dagaal lala galo dowlad kaa dad badan oo taageero dhan walba ah ka heleysa cadowda diinta Islaamka;
Maqnaanshaha ruug caddaa siyaasiyiin Soomaali ah oo fahansan siyaasadda cusub ee dunida maanta
Hadaad fiirisid madaxda MMI, kuma jirin ruug caddaa siyaasiyiin Soomaaliyeed ama xitaa meysan heysan la-taliyayaal dareensiiya Maxkamadaha inay isaga fogaadaan weerayaasha ay qaarkood adeegsan jireen sida:
Soomaali weynbaan raadinaynaa, sida Shiikh Xasan Daahir (Xafidahu Laahu) hadda kahor sheegay;
Waxaan weerar ku nahay Baydhabo, Gaalkacyo, Burco iyo Hargeysa, sida Shiikh Xasan Turki (Xafidahu Laahu) yiri;
Itoobiyada cadowda ah wadanka ha isaga baxdo, sida inta badan madaxda MMI isticmaali jirtay;
Itoobiya toddoba beri wadanka ha isaga baxdo, sida Yuusuf indha-cadde yiri;
Iyo kuwo kale oo farabadan;
Adeegsiga weerayaashaasu ummad ahaan waa mid dareenkeena Soomaaliyeed oo xaqa ah ka tarjumaya waana qadiyaddeena inaan luuqaddaa isticmaalno wax xumaana oo leeyihiin haba yaraatee ma jiraan. Hase yeeshee, hadii ay jiraan dad sokeeye Soomaali ah oo kaa daba-shaqeynaya siyaasadna isku heysataan waxaa la rabey in wixii MMI wax u dhimaya cadowgoodana siinaya sababo ay ku soo weeraraan in la isaga dheeraado.
Siyaasadda cusub ee dunida maanta waa mid halis ah diinta islaamkana looga soo horjeedo. Maadaama ay MMI wateen diintaa aan sheegnay isla markaana aysan dunida ku heysan xulafo awood-sare leh oo hiil iyo hooba ay ka heli kareen, waxaa la rabay inay fahmaan inay maskiin madi ah yihiin talaabadey qadayaana si weyn uga fiirsadaan cadowgoodana siin fursad ay ugu soo duulaan. Nasiib-xumo, iyaku taa ma fahmin siyaasiyiin ruug caddaa ah oo taa fahamsiiyana ma aysan heysan. Aaqir-kiina, meeshii cadowgoodu la doonayey ayay shuluq ku yiraahdeen.
La�aanta khuburo milateri oo MMI kala taliya cawaaqibka ka dhalankara dagaal lala galo dowlad kaa dad badan oo taageero dhan walba ah ka heleysa cadowda diinta Islaamka
Arrinta ah la�aanta khubaro milateri oo MMI kala taliya natiijadda ka dhalan kartay dagaal lala galo duwlad kaa dad badan, kaa dhaqaalo badan, kaa cudud badan, kaana taageero badan, weliba kaa xulafo badan. Waxay aheyd mid ka mid ah fashilkii ku shacay Maxkamadaha, waana midii ugu danbeyntii lagu jabiyey.
Waa midoo, Itoobiya hadeysan xulafada islaam la dirirkaa taageero hiil iyo hooba ka heleyn, marnaba Soomaaliya sooma gasheen. Hadey soo gashana dagaal bareer ah Maxkamadaha wadankeena kulama gasheen. Waxaan hadda ogsoonahay in si cad Mareykanku Itoobiya dhaqaale iyo siyaasadba la garab istaagay si MMI meesha uga saaraan. Taasna aakhirkii xulafada diin la dirirka ah waa ku guuleysteen.
Dowladda Federaalka Ku Meel Gaarka
Shaqsi ahaan, waan ictiraafsanahay Dowladda Federaalka Ku Meel Gaarka (DFKMG) waxaana u taageersan ahay hal qadiyad. Waa midii iyada iyo MMI ay ka sinaayeen ee aheyd mideynta iyo isu raadinta wadankii Soomaaliya. Waxaan la soconaa in waayadan danbe caalamku Soomaaliya waxa ka socda u hanqal-taagayo arrinta gooni isu taaga Soomaalileyn (Somaliland)na maalinba maalina ka danbeysa indhaha shisheeyaha ee taageerida goosashada geyigaa isa soo tareyso.
Waxaan xasuusanaa in haweyneyda Mareykanka ee xooghayaha arrimaha dibedda u qaabilsan Afrika ee Jendayi Frazer tiri bishii la soo dhaafay MMI waxay wadaan Soomaaliweyn oo waxay wadaan inay mideeyaan Soomaaliya iyo Soomaalileyn. Joorma ayey Soomaaliya u kala go�day laba? Taasi waxay ku tusineysaa in haweyneydaasu shaqsi ahaan aqoonsan tahay in Soomaaliya kala go�day. Taas waxaa la wadaaga ninkii jagadaan uga horeeyey ee Helmat Gohin oo horay u sheegay in Soomaalileyn iyo buntleyn labadaba la aqoonsado.
Sidaa awgeed, waxaa la joogaa waqtigii DFKMG ay codka inta badan ee Soomaalida ama aqlabiyada Soomaalida intay ku hadasho fagaarayaasha caalamka ka sheegta dareenkeena ku aadan in midnimadeenu muqadas tahay. Soomaaliyana loo kala jarjarin maxmiyado yar yar oo qaabiilba intiisa goosta. Waxaan ka filaynaa in DFKMG midnimada Soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan ugu istaakto una marto marka hore wadiiqo xeeladeysan. Hadii taasi suuroobi weydana xoog lagu raadiyo ayadoo la mideynayo xoogagga midnimo iyo Soomaali doonka ah.
Waxaan qabaa in DFKMG fursad la siiyo, lana sugo waxa ay qabtaan, sida ay u qabtaan,lana fiiriyo waxtarkooda. Waxaa kaloon jeclaan lahaa in dhaliyarada iyo ragga guud ahaan la dabaqabto inta ka hartay isla markaana wax dagaal ah uusan dhexmarin dowladda iyo xarakadaha diinta.
DFKMG waxaan u soo jeedin lahaa:
Inay beddesho luuqadeeda ku aadan culumada joojisana ereyada argagixiso, xag-jir, seef-labood, maro-kudheg iwm oo culimada loogu gefayo;
In culumada aysan bartilmaameed ka dhigan;
In ay culumada la heshiiso xukunkana laga qeyb-gelsho;
In Tigreega wadanka sida ugu dhaqsiyaha badan uga saaraan waqtina u qabato markey baxayaan;
In dhamaan qab-qablayaashii dagaalka Soomaaliya aan wax xil ama jago ah loo dhiibin;
Ma ahan markii ugu horeysey oo dagaal lagu kala adkaado, qaabkastaba haleysu adeegsadee. MMI dagaal ay filayeen inay ku guuleysan karaan ayey dowlad ka itaal badan la galeen aakhirkiina tabartoodii ayaa u run sheegtay loogana adkaaday. Maxkamaduhu waxay aasaasmeen waqti aad loogu baahnaa mudadii aadka u koobneyd oo wadanka maamulayeena waxaay na ilowsiisey lix iyo tobankii sano ee qaska lagu jiray.
MMI waxay hanteen quluubta ummadda ugu danbeyntiina waxay heleen kalsoonida shacabka waana xarako diinneed oo niyadeena ku beeran oo markii talo qasanto la soo bixi doono anakoo sixi doona waxyaabaha hadda ka qaldamay. Hadii la isbarbardhigo waxqabadkii MMI mudadii ay maamulka hayeen iyo DFKMG oo laba sano iyo dheeraad jirta, lixdii billood intii ay Maxaakiintu ku qabteen dowladdu labadii sanooy jirtay wax xitaa ka agdhow ma aysan qaban. Waxaayba ka bixi waayeen khilaaf dhexdooda ah iyo xukun ku dagaal iskadaa waxay ummad u qabtaane. Aniga malaheyga, lixdii billood oo Maxkamaduhu maamulka hayeen intii ay qabteen, DFKMG kuma qaban doonto lixda sanno ee soo socota. Marka, hadeeyba sidaa u liitaan madiideysaa in MMI yihiin halyey taariikh ka tegey.